दिपाश्री निरौलाको आज जन्मदिन, कति बर्ष लागिन? दीपक भन्छन इश्वरले पठाइदिएको आशीर्वाद - Reel Mandu
दिपाश्री निरौलाको आज जन्मदिन, कति बर्ष लागिन? दीपक भन्छन इश्वरले पठाइदिएको आशीर्वाद
हाँस्यकलाकार, अभिनेत्री, निर्माता तथा निर्देशक दिपाश्री निरौलाको आज भदौ ७ गते सोमबार जन्मदिन परेको छ। आज बाट दिपाश्री निरौला ४५ औ वर्ष पार गरी ४६ औ वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन।
वि.स २०३२ साल भदौ ७ गते विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालमा माता गीतादेवीको कोखबाट जन्मिएकी उनले आजको दिन सम्म आउँदा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा एक किसिमको आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसकेकी छिन् ।
रेडियो नेपाल जैन क्रममा दीपक राज गिरीसंग भेट भएपछी दर्शक माझ ‘धनिया र बिलास’ भनेर निकै लोकप्रिय भए। त्यस पश्चात नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको तितो सत्य आएपछि अझ लोकप्रिय बन्दै आएकी हुन् । ‘तितो सत्य’ बन्द भैसकेको धेरै भएको छ तर पनि दिपाश्री निरौलाको दर्शकमाज क्रेज भने उत्तिकै रहेको छ।
दिपाश्रीले वि.स. २०४२ सालदेखि रंगमञ्चबाट आफ्नो रंगीन जीवन सुरु गरेकी हुन् । रंगमञ्चको दुनियामा हाँस्य कलाकार दीपकराज गिरीसँगको जोडिको रूपमा काम गर्दै आएकी दिपालाई अहिले पनि धेरैले रियल जोडी भन्ने गर्दछन् । दिपाश्री निरौला हालसम्म पनि अविवाहित छिन।
दीपक र दिपाको सहकार्य धेरै लामो भैसकेको छ। यो जोडीले धेरै चर्चित फिल्महरु ‘वडा नम्बर छ, छ एकान छ, छक्का पन्जा- १, छक्का पन्जा- २, छक्का पन्जा- ३, छ माया छपक्कै’ निर्माण गरी सकेका छन् ।
दर्शकबाट पनि धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाएकी दिपा केहि समय अगाडी भने राजेश हमाल विवादमा तानिएकी थिइन्। हाल दीपक दिपाले ९ करोडको लागतमा बानेश्वोरमा सिनेमा हल पनि खोल्दै छन् l रील माण्डु परिवारको तर्फबाट पनि दिपालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना !
यस्तै दिपाश्री निरौलाका सदाबहार सहकर्मी मित्र दीपक राज गिरीले पनि एउटा लामो स्टाटस लेख्दै जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन्।
उनले लेखेको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै:
“३० बर्ष अघिको कुरा हो
म हरेक दिन रेडियो नेपाल जान्थे, नाटक खेल्न
खुट्टामा चप्पल हुन्थ्यो , शरिरमा झुत्रे लुगा
तर ऑखामा मिठो सपना थियो
मिहेनत धेरै गरे , संघर्ष धेरै भयो ,तर सफलता अझै टाढा थियो
हरेक दिन संघर्ष संगै इश्वर संग प्राथना गरिरहन्थे
न मेहनत काम लागिरहेको थियो , न प्रार्थना !
त्यहि समय रेडियो नेपालमा एकदिन उनि संग मेरो भेट भयो
त्यो भेट बिस्तारै सहकार्यमा बदलियो,
“राम बिलास धनियॉ “ ५ बर्ष , “ तीतो सत्य”१२ बर्ष
बिभिन्न चलचित्रहरू १० बर्ष गर्दै आज म यॉहा आइपुगेको छू
मैले इश्वर संग धेरै गुनासो गरेको थिए, सफलता मागेको थिए
तर इश्वरले आशीर्वादको रूपमा कतिबेला उनिलाइ मेरो साथि बनाएर पठाएछन् पत्तै भएन !!!
उनि एउटा यस्तो साथि ,जो अरूको खुशिका लागि आफ्नो खुशि त्यागिदिन्छ ,जो अरूको सपना पूरा गर्न आफ्ना सपनाहरू लाइ पिन्जडामा थुन्न सक्छ!!!
अरूकै लागि हॉस्न सक्ने,अरूकै लागि बॉच्न सक्ने
कसैको ऑशु देख्नै नसक्ने , मुख अलि छुच्चो तर मन सारै कमलो
जस्ले जे भनोस उनि संसार कै सबैभन्दा जाती छिन्
मेरो एउटा साथि छिन् !!!
जो सबैभन्दा माथि छिन् !!!
तिमिलाइ जन्मदिनको लाखौ, करौडौ, अरबौ, खरबौ शुभकामना
प्रिय साथि दीपा!!”